शान्ति संझौता, दुईतिहाई र सपना | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
बुधबार, ०५ मङि्सर २०७५
सन्दर्भः शान्ति संझौताको बाह्रवर्ष
‘‘माओवादीसंग शान्ति संझौता होइन, प्रचण्डको ‘आत्मसमर्पण’हो’’
माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सी.पी.गजुरेलको उक्त अभिव्यक्ति यथार्थ हो कि राजनीतिक तुष ? सी.पी.को आरोप वाहेक पनि विप्लवको भुसको आगो झै सल्कदै गएको विद्रोहको विस्तार र नेकपा भित्रको कार्यशैलीले मुलुक यथार्थमा शान्ति र स्थिरताको वाटो हिड्न नसकेको स्थिती वोध हुन्छ ।
शान्ति संझौताको यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि द्वन्दपीडित तथा वेपत्ता परिवारले कुनै पनि न्याय नपाउनु र पार्टीको उच्च तहमा पहुँच भएकाहहरुले सुविधामाथि सुविधा पाउँदैजानुले शान्ति संझौताको गुढार्थ शान्ति र समृद्धि होइन सत्ताभोग मात्र हो भन्ने आशंका गर्न वाध्य तुल्याउँछ ।
दशवर्षे जनयुद्धबाट मुलुकले धेरे कुरा गुमायो तर शान्ति संझौता भएपछिका १२ वर्षमा के पायो ? गणतन्त्र, संविधान र त्यसको कार्यान्वयनलाई मात्र महान उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरेर आत्मरतिमा रम्नु मात्र हो कि जनताको जीवनस्तर र आर्थिक समृद्धिको दिशा तय हुनु पनि हो ? खै यो दिशातर्फ समाजवादतिर मुलुक हिडेको गुड्डी हाक्ने के.पी. प्रचण्ड मण्डिलीको नेकपा र त्यसको सरकारको ध्यान गएको ? नेकपा भित्र पनि के.पी. र प्रचण्डका भित्रियाहरुले मात्र राष्ट्रिय लुट मच्चाई रहने र द्वन्द पीडित र पहुँचहिन वेपत्ता परिवारले आँशु पिएर जीवन गुजार्नु पर्ने अवस्था दिने सरकारलाई कसरी कम्युनिस्ट सरकार भन्ने ?
भाषण,सम्मेलन,गोष्ठी र भोज भतेरमा रमिरहेको सरकारले हिजो देखि फेरी अर्को नाटक मन्चन गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गरिरहेको छ । ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान गर्न राष्ट्रिय सम्मेलन’ नामदिइएको उक्त भोजभतेरले द्वन्दकालीन घटनालाई निष्कर्षमा पु¥याउला ? द्वन्दकालीन घटना,पीडित तथा वेपत्ता परिवारको यावत तथ्य हुँदाहुँदै र सत्य निरुपण आयोग रहँदा रहँदै अर्को सम्मेलन गरेर आफुलाई साँच्चैको समाजवादी नेता ठान्ने मन्त्री ढकालको स्वार्थ वाहेक केही पनि होइन । के सम्मेलन मात्र समस्या समाधानको थलो हो ? इच्छाशक्ति र आफ्नो सैद्धान्तिक निष्ठा अनुरुपको कृयाशीलता चाहिदैन र ?
द्वन्दको घाउमा कसैले मल्हम लगाएको छ भने त्यो के.पी. का मान्छेले लगाएका होलान ! प्रचण्डका भित्रियाहरुले लगाएका होलान् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्री र उनका नातेदार रजौटाहरुले लगाएका होलान ! जनता, द्वन्दपीडित र वेपत्ता परिवारको अवस्था भने ज्यूँ का त्यु छदैछ ।
युद्धरत पक्षको वाध्यात्मक चाहना र संसदवादी दलहरुले राजावाट धोका पाएकोले गराएको यो शान्ति संझौताको सारभूत उपलब्धी भनेको यी दुई पक्ष र यिनका आसेपासे बाहेक अरु कुनै सार्थक उपलब्धी देखिदैन । गणतन्त्र,संविधान र संघीयता नै महान उपलब्धी भनेर फलाक्नुको सार्थकता पनि जनताले नै अनुभूत गर्ने विषय हो । तर राष्ट्रियरुपमा जनमत नै गर्ने हो भने पनि जनताले कुनै प्रतिफल नपाएको संविधान र संघीयतालाई उपलब्धीको रुपमा आत्मसात गर्न कमै मानिस तयार होलान् । संविधान र संघीयता पद्धति मात्र होइन यो त जनताको जीवनविधि पनि हो । जनताको घरदैलोको सेवा हो । निश्पक्ष र पारदर्शी प्रशासनहो । स्थानिय विकाश, स्वास्थ्य र शिक्षामा शुलभ पहुच र रोजगार हो । तर मुलुक यसको विपरीत पदासिनहरुका लागि सुविधामाथि सुविधा दिएर स्वेच्छचारी ढङ्गले सत्ता परिचालनको पीडाले रन्थनिएको छन् ।
दुई तिहाईको फोस्रो रवाफ
२०१५ सालमा दुई तिहाई पाएको वी.पी. कोइरालाको सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको हितका खातिर सुन्दर सपना देखेको थियो र तदअनुरुप केही योजनाहरु को रुपरेखा कोरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गरिव किसानको फोटो झुण्डियो । एउटा सानो घर, दुध खाने गाई र घर नजिकै स्कुल र शुलभ स्वास्थ्य चौकी सबै नेपालीले पाउन भन्ने चेतना सरकारमा थियो । तर त्यो सरकारलाई राजा महेन्द्रले अल्पायु मै हत्या गरे । अहिलेको दुईतिहाईको सरकारलाई त्यस्तो भावी संत्रास शायद छैन तर किन के.पी. ओलीको दुईतिहाईको वाम सरकार आफ्नो सिद्धान्त र इथिक्स विपरित समृद्धीको गफमा मात्र केन्द्रित छ । न योजना छ, न समृद्धिको सपना कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै देखिन्छ । विभिन्न प्रकारका माफिया, नोकरशाही तन्त्र र कार्यकर्ता लालनपालन वाहेक यो सरकारको कुनै विश्वसनीय योजना र कार्यक्रम देखिदैन । त्यसैले दुई तिहाईको फोस्रो रवाफले के.पी. सरकार स्वयम् स्खलित र पलायनको दिशातर्फ गईरहेको अनुभूति हुँदैछ ।
यतिवेला प्रधानमन्त्री के.पी. र अर्थमन्त्री खतिवडाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख छ । राष्ट्र बैकंका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु नै अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीबाट क्षुब्ध देखिन्छन् । विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । के यस्तो निराशाजनक लगानी अवस्थाबाट मुलुकले समृद्धी हाँसिल गर्ला ? दुईतिहाई वहुमतको तात्पर्य आफ्नो निहितार्थ मात्र हो कि आम भावनाको सम्मान र सहभागिता पनि हो ? मुलुकमा अहिले अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजन्य प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधा र आवास विस्तार
राष्ट्रपति भण्डारीलाई महंगो गाडी र राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारका लागि प्रहरी प्रतिष्ठान त्याहाँवाट विस्थापन गर्ने वहुलट्ठी काम के.पी. सरकारले शुरु गर्दैछ । नेपालको आर्थीक हैसियतका आधारमा शितल निवास नै अहिलेका लागि पर्याप्त कार्यालय हो । हेलिप्याड वा अन्तराष्ट्रियस्तर राष्ट्रपति कार्यालय बनाउने वहानामा ठूलै कमिसनको खेल भइरहेको छ । नेपालको राष्ट्रपति राष्ट्रिय गौरवको संस्था हो । यसो भन्दैमा मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी भवन विस्तार र प्रहरी प्रतिष्ठान विस्थापित गरेर अर्को निमार्णमा ठुलोलगानी गर्नु भनेको बहुलट्ठीपना नै हो । अहिले राष्ट्रपतिलाई कुन र कस्तो सुरक्षा चुनौती छ ? कार्यालय विस्तारको लागि नगरी नहुने कुन चाहि समस्या प्रकट भयो । यसको सही जवाफ के.पी. सरकारले दिने कि नदिने ? कि दुई तिहाईको वलमिच्याईबाट राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गरेरै छोड्ने हो ?
यस्तै उपराष्ट्रपतिको कार्यालय प्रयोजनका लागि समाजकल्याण परिषदको कार्यालयलाई जुन विल्लीवाठ गरिदैछ यो झन निरङकुशता र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठ नै हो । यदी यो सरकार यही रित र शैलीमा बाँकी चारवर्ष गुज्रियो भने मुलुकको अर्थतन्त्र,शान्ति संझौताको भावना र जनताको सपना सबै चकनाचुर हुनेछ ।